Arsenal oo damacsan qorshe ay ku dalbaneyso laba ka mid ah xiddigaha Real Madrid ee aan hadda loo baahneyn. – Gool FM
Arsenal oo damacsan qorshe ay ku dalbaneyso laba ka mid ah xiddigaha Real Madrid ee aan hadda loo baahneyn.
(London) 16 Luulyo 2019. Arsenal ayaa wadda qorshe laga yaabo inuu hirgalo kaas oo ay ku dooneyso laba ka mid ah xiddigaha aan miisaanka culus ku laheyn kooxda Real Madrid.
Gunners waxey isha ku heysaa Lucas Vazquez iyo Keylor Navas kuwaas oo ay hubanti u tahay ineysan kooxdooda ka heli karin booska joogtada ah xagaaga soo aadan, balse ay dagaal adag u gali karaan sidii ay kula tartami lahaayeen ciyaartoyda ay isku booska yahiin.
Unai Emery ayaa raadinaya xiddig garabka ka xamaasha oo qiimo yar lagu heli karo kadib markii kooxdiisa lagu soo diiday dalab 40 Malyan ah oo ay ka gudbiyeen Wilfried Zaha.
Sida ay baahinayaan warbaahinta Spain, Arsenal ayaa diyaarineysa qorshe ay dalabyo rasmi ah uga gudbiso labada xiddig ee Lucas iyo Keylor, waxeyna diyaar u tahay iney miiska saarto adduun dhan 54 Malyan oo Pound.
Navas oo booska koowaad ee kooxda laga dhaxlay ayaa lagu heli karaa 18 Malyan oo Pound, halka Lucas Vazquez oo ka mid ah xiddigaha aan Zidane dooqa koowaad u noqon doonin isna raqiis lagu heli karo.
Arsenal waxey xagaagan 6 Malyan oo Pound kula soo wareegeen Gabriel Martinelli oo ah 18-jir dhanka weerarka ka ciyaara una dhashay wadanka Brazil.